बालबालिकालाई पनि हुनसक्छ दम – Health Post Nepal
२०७९ वैशाख २० गते १३:४९
काठमाडौं–बढ्दो प्रदूषण र गलत जीवनशैलीका कारण आजकाल बालबालिकामा पनि दमको समस्या बढ्दो छ। चिकित्सकका अनुसार १० प्रतिशत बालबालिकामा जन्मजात दमको समस्या हुन्छ भने अन्य ९० प्रतिशतलाई जीवनशैलीका कारण दमको समस्या उत्पन्न हुन्छ। यो रोगमा सासनली वा वरिपरीको जोडिएको खण्ड सुन्निन्छ। यसले गर्दा फोक्सोमा हावा जान कठिनाइ हुन्छ। जतिखेर एलर्जन्स (एलर्जी उत्पन्न गर्ने कारक तत्व) र इरिटेट्स (अप्ठ्यारो उत्पन्न गर्ने तत्व) सास नलीको सम्पर्कमा आउँछन्, त्यसपछि सास फेर्न समस्या हुन थाल्नु नै दम हो।
अमेरिकी सीडीसीको एक तथ्यांकअनुसार १७ वर्षमुनिका ६० लाख अमेरिकी बालबालिकालाई दम भएको पाइएको छ। अर्थात् अमेरिकामा प्रति १२ बालबालिकामा १ जनामा दम छ।
बालबालिकालाई किन हुन्छ दम?
धूलोको एलर्जीका कारण
प्रदूषित सहरमा बसोबास गर्नेहरुमा
खराब जीवनशैली र खानपानका कारण
कमजोर प्रतिरोधी प्रणाली भएका बालबालिकामा
ठीक हुन्छ बच्चाको दम?
बालबालिकाको उमेर बढ्दै जाँदा प्रतिरोधी प्रणाली पनि मजबूत हुँदै जान्छ। अधिकांश बालबालिकामा १२ वर्षपछि यो समस्या ठीक हुन्छ। तर त्योभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको रोगप्रतिरोधी प्रणाली कमजोर हुने भएकाले समस्या उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ।
बच्चामा दमको समस्या देखिए के गर्ने?
बच्चामा अचानक दम भए या श्वास लिन समस्या भए घरमा एन्टिहिस्टामिन सिरप या ट्याब्लेट राख्नुपर्छ। यसले बच्चाको दमको अट्याकलाई शान्त राख्न मद्धत गर्छ। त्यसपछि बच्चालाई चिकित्सकले जाँच गरी उपचार गर्न सकिन्छ।
बच्चालाई इन्हेलर दिनु ठीक हुन्छ?
डाक्टरको परामर्शविना बालिबालिकालाई इन्हेलर प्रयोग गर्न दिनुहुन्न, खासगरी १२ वर्षभन्दा कम उमेरकालाई। बारम्बार इन्हेलर प्रयोग गर्दा मुखमा संक्रमण हुनसक्छ र पटक–पटक घाँटी सुक्न सक्छ। यद्यपि इन्हेलरले दमको अट्याक तत्काल शान्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
यदि वंशाणुगत रुपमा दम नभएको हो भने जीवनशैली र डाइटमा सुधार गरेर बालबालिकालाई दमबाट बचाउन सकिन्छ। सही पोषणले उनीहरुको प्रतिरोधी प्रणाली मजबूत भई संक्रमण र एलर्जीबाट लड्ने क्षमता विकास हुन्छ।
सास फेर्न असजिलो हुनु
खोकीले गर्दा निद्रामा अवरोध हुनु
खोकी प्रायः राति लाग्नु
सासमा घ्यारघ्यार सुनिनु
सास फेर्दा सिटी बजेजस्तो हुनु
छातिमा पीडा हुनु